चीनबाट नेपालीको उद्धार गरेर ल्याउने वाइड बडी जहाजले थाल्यो नियमित उडान — Imandarmedia.com
चीनबाट नेपालीको उद्धार गरेर ल्याउने वाइड बडी जहाजले थाल्यो नियमित उडान
काठमाडौं । चीनको हुवान प्रान्तको वुहान शहरबाट नेपालीलाई ल्याएको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को वाइड बडी ए–३३० जहाजले आजदेखि नियमित उडान गर्ने भएको छ ।
वुहानबाट १७५ जना नेपालीलाई काठमाडौं ल्याएको सो वाइड बडी जहाजले अन्तराष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्डअनुरुप ४८ घण्टा क्वारेन्टाइनको समय पार गरेपछि नियमित उडानमा फर्किएको हो । उक्त जहाजबाट कोरोना भाइरस फैलिएको वुहानबाट यही फागुन ४ गते बिहान नेपालीलाई स्वदेश ल्याइएको थियो । जहाजको क्वारेन्टाइनको अवधि आज बिहान सकिएपछि दिउँसो सरसफाइ गरेर उडानयोग्य बनाइने छ ।
चीनबाट नेपाली ल्याएको वाइड बडी जहाजले आजदेखि नियमित उडान शुरु गर्ने तयारी गरेको निगमका प्रवक्ता अर्चना खड्काले जानकारी दिइन् । ‘जहाजको सबै प्रक्रिया पूरा गरेर आज रातिदेखि नियमित उडानमा राखेका छौं, जहाजको आवश्यक सरसफाइलगायत सबै मापदण्ड पूरा गरेपछि पुनः उडान शुरु गरिने छ’, उनले भने ।
निगमको निर्धारित तालिकाअनुरुप वाइड बडी जहाजले आज राति १०ः३० बजे दोहाका लागि उडान भर्नेछ । जहाजलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसार सबै प्रक्रिया पूरा गरिन नियमित उडानमा ल्याउन लागिएको निगमले जनाएको छ । जहाजलाई विमानस्थलको उत्तरपूर्वतर्फको ‘रिमोर्ट पार्किङ वे’ मा राखिएको छ ।
वाइड बडी विमान दुई चिकित्सक, दुई नर्स, तीन पाइलट, सात क्रुमेकर, एक इन्जिनीयर, एक प्राविधिक र एक डिस्पास्चर गरी १७ जना सहितको टोली शनिबार चीनको वुहान गएको थियो । सो स्थानबाट १७० विद्यार्थी, दुई बालबालिका, दुई पर्यटक र एक कामदारसहित १७५ जनालाई लिएर जहाज आइतबार बिहान ३ बजेर ३६ मिनेटमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण भएको थियो ।
वुहानबाट फर्किएका सबैलाई भक्तपुरको खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तालीम केन्द्रमा निर्माण भएको क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ भने जहाजका विमानचालक (पाइलट) सहित सबै सदस्यलाई पनि क्वारेन्टाइनका लागि नगरकोटमा राखिएको छ ।
नेप्सेमा नयाँ रेकर्ड, बजार पुँजीकरण ३४ खर्ब ५२ अर्ब
नेपालमै गाईले जन्मायो तीन वटा बाच्छी, लक्ष्मीको संज्ञा दिँदै हेर्न आउनेको भिड
आज फेरी घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?
राष्ट्र बैंकको यस्ताे कडा निर्देशनपछि भोलि शनिबार पनि बैंकहरू खुला रहने, कारणसहित
नेपाली बजारमा सुनको मूल्य वृद्धि, कतिमा हुदैछ कारोबार ?
आज फेरि बढ्यो सुनचाँदीको मुल्य , कतिमा भइरहेकाे छ कारोबार ?
प्राधिकरणले भन्यो-पुनर्निर्माणमा पाकिस्तान र भारतभन्दा नेपाल अगाडि तिब्र गतिमा भएको
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र बेलबारी नगरपालिकाबीच सहुलियतपूर्ण कर्जामा सहकार्य गर्ने सम्झौता
उर्जा बचत कार्य गरे वापत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकद्धारा विभिन्न कम्पनीलाई अनुदान रकम हस्तान्तरण